Shaqsi Ku Sugan Real Madrid Oo Caqabad Ku Noqonaya In Los Blancos Ay Hesho Eden Hazard Iyo Neymar Jr | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Shaqsi Ku Sugan Real Madrid Oo Caqabad Ku Noqonaya In Los Blancos Ay Hesho Eden Hazard Iyo Neymar Jr
(14-12-2018) Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa halis ugu jirta in ay weydo dhamaan xiddigaha magac leh ee ay ka doonayso inay ka hesho suuqa kala iibsiga ciyaartoyga, kuwaas oo ay qorshaynayso in xagaaga soo socda ugu yaraan hal laacib oo magac weyn ay safkeeda kusoo kordhiso.
Real Madrid ayaa lala xidhiidhiyey labada ciyaartoy ee Eden Hazard iyo Neymar Jr, hase yeeshee labada midkoodna ma tegi doono garoonka Santiago Bernabeu, waxaana sabab u ah shaqaalaha naadiga oo abuuray jewi aanay xiddigaha waaweyn kusoo dhiiranaynin inay Bernabeu tagaan.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa dalka Spain, inta uu Real Madrid tababare u yahay Santiago Solari kuma soo dhiirran doono Eden Hazard inuu xidho funaanadda Los Blancos, waxaana uu diidi doonaa inuu qalinka u qaato heshiiska la filayo inuu mustaqbalkiisa ugu guuriyo halkaas.
Wargeysku waxa uu xusay in aanu Hazard oo kali ah ahayn laacibka weyn ee uu tababarahani ka galaafan doono Real Madrid, balse aanay dhamaan xiddigaha xilligan lala xidhidhinayo tegi doonin.
Wargeysku si gaar ah uma qodobaynin caqabadaha uu la kulmi doono Hazard haddii uu Real Madrid tago inta uu tababare Solari joogo, hase yeeshee waxa uu farta ku fiiqay inuu dhibaatoon doono, isla markaana ku fashilmi doono.